‘लाल्टिन’ र ऋचाको ‘आधा लभ’ लाई लाग्ला लक ? « Ramailo छ
‘लाल्टिन’ र ऋचाको ‘आधा लभ’ लाई लाग्ला लक ?
यो शुक्रबार देखि फिल्महरु ‘लाल्टिन’ र ‘आधा लभ’ अल नेपाल प्रदर्शनमा आएका छन् । यी दुई फरक जनराका फिल्महरुको व्यापार र दर्शक प्रतिक्रिया कस्तो होला, प्रतिक्षा गरौं । अहिलेलाई भने ‘लाल्टिन’ र ‘आधा लभ’ बारे छोटो चर्चा गरौं :
‘लाल्टिन’ पोस्टर ।
दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी जस्ता स्टार अभिनित फिल्म लाल्टिन ग्याङस्टार र पुलिस प्रशासन सम्बन्धी फिल्म हो । देव कुमार श्रेष्ठ निर्देशित यो फिल्मलाई भानु प्रतापले निर्माण गरेका हुन् । अभिनेता दयाहाङले यो फिल्म व्यापारिक रुपमा सफल हुने विश्वास राखेका छन् । केकी र प्रियंकाले फिल्मको प्रचार प्रसारमा समय दिन सकेनन् । बरु नव नायक राज कटुवाल र निरजन थापाले ‘लाल्टिन’ हेर्न दर्शकलाई अपिल गरिहेका छन् ।
‘आधा लभ’ प्रिमियरमा ऋचा र अर्पण ।
ऋचा शर्माले निर्माण गरेको फिल्म ‘आधा लभ’ राजधानीको अपार्टमेन्टमा बस्ने विभिन्न युगल जोडीको कथा हो । भव्य अपार्टमेन्टमा बस्नेहरुको लभ रिलेशनलाई देखाइएको फिल्ममा ऋचा शर्मा, अर्पण थापा, रोजिशा शाही ठकुरी, रेमनदास श्रेष्ठ लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । आधा लभ लाई अर्पण थापाले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको बुधबार प्रिमियर शो गरिएको थियो । प्रिमियरमा आगन्तुकले फिल्मका प्रशंसा गरेका छन् । एक वर्गका दर्शकलाई फिल्मले हलसम्म तान्ने उनीहरुको विश्वास छ ।